﻿ खेलकुदमा पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिएकोमा धन्यवाद, तर बजेट पुगेन
खेलकुदमा पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिएकोमा धन्यवाद, तर बजेट पुगेन
- केशव विष्ट
आइतबार १६, जेठ २०७८
आ. व. २०७८/०७९ को लागि हालै अध्यादेश द्वारा बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । जसमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत २ अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो बजेट अपर्याप्त छ र पुराना योजनाहरुलाई निरन्तरता दिन पुग्दो छैन । मैले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिवको कार्यभार सम्पन्न गरिसकेको हिसाबले मलाई थाहा भएअनुसार केही कुरा राख्दैछु ।
पौने तीन अर्ब रुपैया बजेटमा युवातर्फ १ अर्ब बजेट खर्च हुने अनुमान गर्दा १ अर्ब ७४ करोड रुपैया खेलकुद मन्त्रालयले खर्च गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यो रकममा मन्त्रालय आफैंले तालिम, प्रशिक्षण, गोष्ठि, सेमिनार, कार्यकम, भत्ता, भ्रमण आदि शिर्षकमा ठूलै बजेट राख्ने गर्छ ।
त्यती खर्चेर बाँकि रहेको बजेट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले आफै कार्यान्वयन गर्ने हो । यो बजेटको झन्डै १ अर्ब त कर्मचारी, तलब, सेवा, सुविधा, भत्ता, साधारणतर्फ खर्च हुन्छ । त्यो सबैमा अर्को एक अर्ब रुपैया खर्च हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
त्यती खर्चेर बाँकी रहेको ५०–६० करोड रुपैयाले कति काम गर्न सकिएला ? कति खेलकुद प्रतियोगिता गर्न सकिन्छ ? खेलाडीलाई दिने प्रशिक्षणको स्तर कस्तो होला ? त्यती पैसाले खेलकुद विकास र पुर्वाधार निर्माणमा कति लगानी गर्ने ? खेलाडी र पुर्व खेलाडीको संरक्षण कसरी गर्ने ? खेलकर्मीलाई प्रोत्साहन र पुरस्कारको व्यवस्था कसरी गर्ने ? नयाँ खेल प्रतिभाहरुको खोजी र क्षमता अभिवृद्धि कसरी गराउने ? अन्तरर्राष्ट्रिय प्रविधि र अनुसन्धानको प्रयोगमा अभिवृद्धि कसरी गराउने ? यी र यस्ता धेरै सवाल अनुत्तरित छन् ।
यस्ता आवश्यकतालाई सरकारले कहिले पनि गम्भीरतापुर्वक लिएको देखिदैन । यसपाली त कमसेकम चुनावलाई ख्याल गरेरै भएपनि खेलकुदमा उल्लेख्य बजेट आउला, नेतृत्वले ल्याउन सक्ला भन्ने पनि लागेको थियो । तर विगतमा जत्तिको बजेट पनि आएन । अझ ल्याइएको बजेटको कार्यान्वयन नै कति हुन्छ, त्यो त भविष्यमा देखिएला ।
खुसीको कुरा के छ भने विगतमा सुरुवात गरिएको लाई निरन्तरता दिने भनिएको छ । नयाँ केही छैन । हुन त कोरोना महामारीको बेला नयाँ सुरुवात गर्न कठिनाई हुन्छ । तर कमसेकम सुरुवात भएकाले पुर्णता पाओस् र निरन्तरता पाइरहोस् भन्ने चाहना हो ।
इटहरीमा प्रादेशिक रंगशालाको अवधारणा ४ वर्ष पहिलेदेखि नै ल्याएर १ नम्बर प्रदेशमा इटहरी, २ नम्बर प्रदेशमा जनकपुर, ३ नम्बर प्रदेशमा काठमाडौं, ४ नम्वरमा पोखरा, ५ नम्वरमा नेपालगञ्ज, ६ नम्वरमा सुर्खेत र ७ नम्बरमा धनगढी तोकेर निर्माण कार्य आरम्भ गरिएको थियो ।
नयाँ खेलकुद ऐन जारी नभइसकेको अवस्थामा सार्वजनिक गर्न पाइएको थिएन । गतवर्ष इटहरीलगायत कतिपय रंगशालामा संघीय बजेट नआउदा शंका उत्पन्न भएको थियो । तर गत वर्ष ऐन जारी भएपछि यो वर्ष घोषणा भएको छ । अहिले जनकपुरको स्थानमा वीरगंज भएछ । तर पनि कम्तिमा यो सार्वजनिक भएकोमा हार्दिक स्वागत छ । जे होस्, अब सार्वजनिक भयो । आशा गरौँ बजेटले निरन्तरता पाउला । थप केही सुझाव दिन चाहन्छु ।
इटहरीको रङ्गशालामा फ्लड लाइट, खेलाडी आवासीय भवन, अन्तरर्राष्ट्रियस्तरको पौडि पोखरी, फुटबल प्रशिक्षण मैदान र क्रिकेट रङ्गशाला अझै निर्माण गर्न बाँकी छ । पुर्वपट्टीको ८ विगाहा जग्गा थप गरी काम सुरु होस् । घोषणा गरीएका क्रिकेट रङ्गशालाहरु सबै पहिलेदेखि नै निर्माण सुरु भइराखेका हुन् । नयाँ छैनन् ।
दमकको रंगशालाको मास्टर प्लान, डिपिआर र थ्रीडी को काम ३ वर्ष अगाडी नै पुरा गरी म लगायतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्युलाई देखाइ, बुझाई गरी बजेटमा राखिसकीएको थियो । यसपाली सुरुवात होस । अघिल्लो पटक विष्णु पौडेल नै अर्थ मन्त्रि भएको बेला आ. व. २०७३/०७४ को बजेट निर्माणको क्रममा राखेपले बजेट माग गर्दा नै प्रस्तुत गरेको र अर्थमन्त्रिले मन पनि पराएको तर भूकम्पको कारण देखाउँदै समावेश गर्न असमर्थ हुनुभएकोमध्ये एउटालाई चाहिँ यसपाली सम्झेर समावेश गर्नुभएछ ।
पुर्व खेलाडीलाई व्यवसाय गर्न सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा आएछ । त्यो बेला मैले चाहिँ खेलकुदसँग सम्बन्धि व्यवसाय भनेको थिएँ । तर वहाँले बिर्सेर हो वा अझ दायरा ठुलो पार्नुभएको हो । जे होस्, सम्बोधन गर्नुभएकोमा धन्यवाद मन्त्रीज्यू । तर २०७३ सालदेखि पुर्व अन्तराष्ट्रिय पदकधारी खेलाडीलाई दिइदै आएको खेलाडी सम्मान भत्ता यो आवसम्ममा वृद्धि भएर न्युनतम पनि मासिक रु १०,००० पुर्याउनुपर्ने विषय भने उल्लेख भएन । राखेपकै माग त्यस्तै थियो कि ?
खेलकुद विद्यालय भन्ने चाहिँ नयाँ आयो, तर बुझिएन । यो हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएको र माग पनि गर्दै आएको स्पोर्टस् ट्रेनिङ सेन्टरलाई नै स्कुल नामाकरण गरिएको हो कि ? पछि थाहा होला ।
अन्तमा प्रत्येक २ वर्षमा आयोजना गरीने राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गत वर्ष हुन सकेन । यो वर्ष आयोजना हुन सकोस् ।
(विष्टले फेसबुकमा लेखेको स्टाटसका आधारमा तयार गरिएको सामाग्री)
पुष्पलालले जन्माएको कम्युनिष्ट र अहिलेको छिन्नभिन्न कम्युनिष्ट
आऊ हातेमालो गरेर देशघाती कार्य परास्त गरौँ